आफ्नै आमा कहाँ छन् के गर्दै छन् थाहा छैन, यता सौतेनी आमाले पिटर यस्तो हालत, बुवा युएईमा (भिडियोसहित) – PathivaraOnline
Home > समाचार > आफ्नै आमा कहाँ छन् के गर्दै छन् थाहा छैन, यता सौतेनी आमाले पिटर यस्तो हालत, बुवा युएईमा (भिडियोसहित)
आफ्नै आमा कहाँ छन् के गर्दै छन् थाहा छैन, यता सौतेनी आमाले पिटर यस्तो हालत, बुवा युएईमा (भिडियोसहित)
admin July 25, 2019 July 25, 2019 समाचार	0
काठमाडौं, ९ साउन । सौतेनी आमाको कुटाई त्यी दुईले दैनिक रुपमै खाईरहन्थे । कसैलाई भने अझ पिट्ने आमाले धम्की दिन्थिन् । गत असार ६ गते शुक्रबार विद्यालयमा झोक्रिएर बसेका सुशिललाई शिक्षकले कारण सोधे तर बताएनन् । सीता मावि चरङ्गेका शिक्षक लेखनाथ थापाले ढाडमा के छोएका थिए शुशिल ऐया आमा भनेर चिच्याए । सर्ट निकालेर हेर्दा ढाडभरी नीलडाम र चोट देखिए । त्यसपछि यो घटना बाहिर आएको थियो ।
शिक्षकले कुटिएर सख्त घाइते देखेपछि बहिनी सिर्जनालाई सोधे । उनको पनि शरीरको विभिन्न अंगमा नीलडाम थिए । दाजुबहिनी नै कुटिएको देखेपछि छिमेकीलाई सोधीखोजी शिक्षकले गरे । त्यसपछि घरकै सानी आमाले पिटेको रहस्य खुले प्रहरीलाई खबर गरी दाजुबहिनीको उद्धार भएको थियो । सिर्जना दुई बर्षकी हुँदा उनकी आमाले दोस्रो विहे गरेर गएपछि जीतबहादुरले डिलमाया संग दोस्रो बिहे गरेका थिए ।
जीत बहादुर अहिले रोजगारीका लागि दुवईमा छन् । प्रहरीले पक्राउ गरेपछि फुपु दिदिको रहेका दुई बालकालिका आमा अदालतबाट छुटेर आएपछि पनि घर गएका छैन् । “आमा आएको थाहा पाएपनि उनीहरु घरमा गएका छैन्” त्यी बालबालिकाकी फुपु दिदि बसन्ती थापाले भनिन् ।
विभिन्न मुद्दाका ७० फरार प्रतिवादीहरु पक्राउ
वालिङ, ९ साउन (रासस) ः विभिन्न आपराधिक घटनामा संलग्न ७० फरार प्रतिवादीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा विभिन्न आपराधिक घटनामा संलग्न फरार ७० फरार प्रतिवादीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा अन्तर्गतका प्रहरी एकाइहरुबाट प्रहरी परिचालन गरी पक्राउ गरिएको उक्त कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक तथा प्रवक्ता नवीनकृष्ण भण्डारीले बताउनुभयो ।
पक्राउ परेका ७० मध्ये जरिवाना तिरेर ५१ जना छुटेका छन् भने १९ कैद भुक्तानका लागि कारागार चलान भएका प्रहरी प्रवक्ता भण्डारीले बताउनुभयो ।
सार्वजनिक अपराधका मुद्दा, बहुविवाह, कर्तव्य ज्यान मुद्दा, अंशबण्डा, जबर्जस्तीकरणी, सम्बन्ध विच्छेद, कुटपिट तथा लुटपिट, लागुऔषध, ठगी मुद्दाका फरार प्रतिवादीहरुलाई पक्राउ गरी कारवाहीका लागि जिल्ला अदालतमा पेश गरेको प्रवक्ता भण्डारीले बताउनुभयो ।
एकै ठाउमा चार जनाको भयानक ह**त्या ! जे*ल भित्रै बसेर यस्तो यो*जना बनाउदै
हामी अपराधी हुन बाट बच्यौ, नम्रतालाई घाटमा लगेको हो, मलामी पनि बोलाएको हो (भिडियोसहित)
कोभिड महामारीले पनि छेकेन महिला र बालबालिका बेचबिखन!
डोटीमा मध्यरातमा घर भत्किँदा एकै परिवारकाे ४ जनाकाे ज्यान गयो
एनसेलको पछि हात धोएर लाग्ने समुहले फेरी जलाइदियो अर्को गाडी, प्राविधिक टोली नै अलपत्र